देउवा-प्रचण्ड भेट कतै नयाँ समीकरणको तयारी त भइरहेको छैन ? डेढ घण्टा लामो भेटमा के भयो कुराकानी ? «
देउवा-प्रचण्ड भेट कतै नयाँ समीकरणको तयारी त भइरहेको छैन ? डेढ घण्टा लामो भेटमा के भयो कुराकानी ?
प्रकाशित मिति : 14 January, 2021 1:21 pm
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच डेढ घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ । देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा दुई नेताबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भएको हो ।
सभापति देउवासँग भेटका लागि बुधबार साँझ ६ बजे नेकपा अध्यक्षद्वय दाहाल र माधवकुमार नेपाल बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । करिब २० मिनेटको भेटवार्तापछि अध्यक्ष नेपाल बाहिरिएका थिए ।
माधकुमार नेपाल बाहिरिए पनि प्रचण्ड भने त्यहीँ बसेका थिए । नेपालसहित हुँदा नै नेकपा अध्यक्षद्वयले सभापति देउवालाई प्रतिनिधिसभा विघटनले संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै संविधानको रक्षाका लागि संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तो प्रस्तावलाई देउवाले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै अदालतलाई दिएको भन्दै अदालतको फैसला कुर्न आग्रह गरेका थिए । सभापति देउवाले आफ्नो सहयोगीका रुपमा नेता रमेश लेखकलाई पनि साथमा राखेका थिए ।
भेटमा सहभागी कांग्रेस नेता लेखकले भने, “प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमविरुद्ध संयुक्त आ’न्दोलन गरौँ भन्ने उहाँहरुको प्रस्ताव थियो ।”
उनले त्यस विषयमा सहाभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले निर्णय गरेर नै असंवैधानिक भनिसकेको भन्दै अब त्यो विषय अदालतमा पुगेको बताएको जानकारी दिए । “सभापतिजीले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनिसकेको तर अहिले त्यो विषय सर्वोच्चमा रहेको बताउनुभयो,” लेखकले भने, “संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधानले नै सर्वोच्चलाई नै दिएको छ, त्यसैले सर्वोच्चको फैसला कुरौँ भन्ने प्रस्ताव सभापतिजीको रहेको छ ।”
उनले नेकपा अध्यक्षद्वयले नेकपामा आफ्नो समूहलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको जानकारी दिए । “उहाँहरुले नेकपाको दुई समूहमा आफ्नो समूहलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको थियो,’’ लेखकले भने, “सभापतिजीले कुन समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कांग्रेस निर्णयमा नपुगेको भन्दै त्यो विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल गराउने बताउनुभएको छ ।’’
यति विषयमा छलफल भएपछि नेकपा अध्यक्ष नेपाल भने अर्को बैठक रहेको भन्दै बाहिरिएका थिए । नेपाल बाहिरिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले भने धेरैबेर देउवा निवासमै बिताएका थिए । दुई नेताबीच करिब डेढ घण्टा भेट भएको थियो । अध्यक्ष दाहालले त्यति लामो समयसम्म देउवा निवासमा के कुरा गरे र देउवा र दाहालबीच कुन विषयमा छलफल भयो भन्ने विषय भने सार्वजनिक गरिएको छ ।
०७३ वैशाखमा पनि देउवा र दाहालबीच भेटवार्ता भएपछि केपी शर्मा ओली सरकार संकटमा परेको थियो । त्यस बेला सरकार जोगाएका ओली असारमा देउवा-प्रचण्ड गठबन्धन भएकै कारण सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका थिए । त्यस बेला पनि सुवास नेम्वाङमार्फत संविधानानुसार सत्ता छोड्न नमिल्ने भन्दै बसेका ओली सरकारबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि ‘फेस सेभिङ’का लागि संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेका थिए ।
यसपटक ओली आफूले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्चको आदेशमा पुनःस्थापना भए देउवाकै सहयोगमा सरकारमा रहने वा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने तयारीमा छन् । तर, देउवा-प्रचण्ड भेटले कतै नयाँ समीकरणको तयारी त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।